च्याउ खेतीको बीमा कसरी गर्ने ? बीमा लेखको पुर्णपाठ सहित… – Beema News
च्याउ खेतीको बीमा कसरी गर्ने ? बीमा लेखको पुर्णपाठ सहित…
प्रकाशित मिति: ११ पुष २०७४, मंगलवार १२:२४
काठमाडौं । च्याउ फूल नफूल्ने विरुवा अन्तगर्त फन्जाई वर्गका हुन् । चिसो, ओसिलो र कुहिएको वस्तुमा उम्रने यसका प्रजातीहरु अहिले सम्म संसारमा ३ हजार ८ सय जातको रहेको छ । त्यस मध्ये २ हजार जाती खान योग्य, एक हजार जाती विषालु र दुई सय च्याउ औषधिय गुण भएको तथ्य बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् । ति च्याउहरुमा विभिन्न भिटामिन, प्रोटिन, थाइमिन, राइवोलेविन, नाइसिन, एसकभिर्भ एसिड, र विभिन्न मिनरल्सहरुका साथै भिटामिन ए,बि,सी र क्यासियम समेत पाइन्छ । त्यसैले यसलाई पोष्टिक र स्वथ्यकर खानको रुपमा लिइन्छ ।त्यसैको परिणम स्वरुप नेपालमा च्याउको माग समेत बढेदै गएको छ ।
पछिल्लो समय यसको व्यवसायिक खेति प्रति किसानहरुको आर्कषण समेत बढेको छ । किसानहरुको लगानी पनि बढ्दै गएको छ । हरेक व्यवसायमा जस्तै यो व्यवसायमा पनि उतिकै जोखिम हुन्छ । त्यसैले बीमा समितिले च्याउ खेती बीमालेख जारी गरेको छ । यस बीमालेखले विभिन्न कारण च्याउ खेतीमा हुने हानी, नोक्सानी वा क्षतिको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ । बीमा अवधिभित्र च्याउखेतीको हानी–नोक्सानी वा क्षति भएमा बीमाङ्कको सिमा भित्र रहि सम्बन्धित पक्षलाई बीमकले भुक्तानी गर्दछ ।
बीमालेखले सुरक्षा गर्ने जोखिमहरू ;
यस बीमामा रक्षावरण गर्ने सिमाहरु सिमित छन् । क्षतिको सम्पुर्ण जोखिमलाई यस बीमाले समेट्दैन । आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी/डुवान/खडेरी, पहिरो/भूस्खलन, आँधिबेहरी, असिना, हिऊँ वा तुसारो, आकस्मिक/दुर्घटनाजन्य बाह्य कारणहरु र किरा तथा रोगबाट हुने हानी–नोक्सानी मात्रै लागत मूल्यको आधारमा क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गर्दछ । बीमकले बीमाङ्कको सिमा सम्म वास्तविक क्षतीको रकम बीमितलाई भुक्तानी गर्दछ ।
बीमा गर्दा बीमितले निश्चित शर्तहरु पालना गर्नुपर्दछ्, अन्यथा बीमालेख रद्ध पनि हुन्छ । बीमा लेख रद्ध भएको अवस्थामा क्षतिपुर्ति बराबरको रकमबाट बीमित बन्चित हुन्छ । च्याउमा कुनै रोग/किरा वा दुवै लागेमा च्याउ धनीले तत्काल आफ्नै खर्चमा उचित रेखदेख गराउनु पर्दछ । बीमकले चाहेको जुनसुकै समयमा च्याउखेती परीक्षण गर्न आउने बीमक वा तोकिएको संस्थाका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई च्याउखेतीको परीक्षण गर्न दिनु पर्दछ । च्याउ धनीले च्याउखेतीको क्षति/हानी–नोक्सानी भएमा ३ दिनभित्र लिखित जानकारी बीमकलाई दिनु पर्नेछ । यस बीमालेख अन्तर्गत बीमा गरिएको च्याउखेतीको क्षति भएको कारणबाट हुने अन्य वा थप खर्च वा हानी–नोक्सानीको दाबी गर्न पाइदैन् ।
बीमा गरिएको च्याउको हानी वा नोक्सानी/ क्षति भएमा १५ दिन भित्र आवश्यक कागजपत्रहरु सहित दाबी गर्नुपर्दछ । बीमा सकम दाबी गर्दा सक्कल बीमालेख, पूर्ण रूपले भरिएको दाबी फाराम, प्राविधिकको प्रतिवेदन, सम्बन्धित गा.वि.स. वा न.पा. वा वडाको सर्जमिन मुचुल्का सहितको कागजातहरु बीमक समक्ष पेस गर्नु पर्दछ । त्यसपछि मात्रै दाबी भुक्तानी प्रकृया अघि बढ्छ ।